Manamafy ny Fiarovana Manoloana Ny Herisetra An-tokantrano i Kyrgyzstan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2017 4:19 GMT
Herisetra an-tokantrano. Sary iombonana ao amin'ny Wikimedia.
Ity manaraka ity dia lahatsoratra mpiaramiasa avy amin'ny EurasiaNet.org, nosoratan'i Nurjamal Djanibekova. Naverina navoaka rehefa nahazoana alàlana.
Tao anaty fanapahankevitra iray manantantara, nanao lalàna i Kyrgyzstan hanomezana fiarovana misimisy kokoa ho an'ireo iharan'ny fanararaotana ao an-tokantrano.
Efa manana lalàna maro i Kyrgyzstan momba ny fanamelohana ny herisetra an-tokantrano, saingy ilay lalàna nankatoavin'ny filoha Almazbek Atambayev tamin'ny 28 Aprily teo dia mitondra fanitsiana fototra sy manandanja tokoa.
Andalana iray isan'ny vaovao ao anatiny ny fitakiana amin'ny polisy hamaly ireo antso tsirairay momba ny herisetra an-tokantrano. Midika io fa na iza na iza dia afaka mametraka fitarainana, na vavolombelona nanatrika fotsiny aza izy ireo fa tsy tena mpandray anjara mivantana tao anatin'ilay herisetra.
Tao anatin'ilay lalàna talohany, tsy afaka manokatra fanadihadiana ny polisy ary tsy afaka manao tsindry momba ireo fiampangana ho nanao heloka raha tsy ilay niharany mihitsy no manao ny tatitra. Azo an-tsaina tsara fa marobe ireo niharan'ny herisetra nataom-bady no matahotra hitondra raharaha eny amin'ny polisy noho ny tahotra sao mety vao mainka hihamafy ny fampijaliana. Na amin'ireo tranganà fanararaotana voarakitra anaty lahatsary aza, toy ny efa fepetra mihitsy ho an'ny polisy ny mandà tsy hanao na inona na inona.
“Raha raisina ny hoe matetika dia lehilahy daholo ny polisy, tsy mametraka fitoriana ireo niharan'ny herisetra, ary raha manao izany aza ry zareo, mazàna no misintona azy ireny ny ampitson'iny”, hoy i Zulfiya Kochorbayeva, manampahaizana momba ny olana mifandray amin'ny maha-lahy na vavy ary nandray anjara tamin'ny fandrafetana ilay lalàna vaovao, tamin'ny EurasiaNet.org.
Ho an'i Kochorbayeva, manandanja manokana ny hoe ankehitrny ireo vehivavy tsirairay niharan'ny fanararaotana ao an-tokantrano dia hahazo fiarovana araka ny lalàna. Hanampy hiantohana ny fiarovana izay niharan'ny herisetra voalaza io no sady hanampy amin'ny fisorohana ireo famaizana feno fandrahonana avy amin'ireo nanao izany na ny fianakavian'izy ireo, telo andro raha kely indrindra. Raha mety hisy loza mananontanona ho an'ilay niharany raha tapitra ny telo andro, dia azon'izy ireo atao ny milaza amin'ny polisy ary maka didy fanitàrana izany ho volana iray.
“Hatreto aloha, mba hahafahana mahazo fiarovana araka ny lalàna, mila manaporofo eo anatrehan'ny fitsaràna ilay vehivavy hoe tena nisy tokoa ilay herisetra an-tokantrano. Nohalefahanay araka izay azo natao ny dingana arahana ary nesorina ny vesatra zakain'ireo niharany. Amin'io dia tsy afaka intsony ireo fianakavian'ilay vady nanao herisetra hanao tsindry amin'ilay niharany mba hisintona ny fitoriany. Ho fantatr'izy ireo fa io no lalàna,” hoy i Kochorbayeva.
Nambaran'i Kochorbayeva fa ilay fiarovana araka ny lalàna dia homena avy hatrany ny manampahefana ao amin'ny polisy vantany vao misy fitoriana napetraka, ary ezahana ho fohy araka izay tratra ny elanelan'ny fotoana nametrahana ilay tatitra voalohany sy ny fihainoana am-bava eny amin'ny fitsaràna.
Hiaro ihany koa ireo havan'ny niharam-boina ilay lalàna vaovao, amin'ny fanamelohana manokana ny mety ho andrana fampitahorana atao azy ireo.
Amin'izao fotoana izao ireo ankizy tsy ampy taona iharan'ny herisetra ao an-tokantrano dia afaka ny ho isan'ireo hahazo haingana ny fandefasana azy ho any amin'ireo olona manampahaizana manokana momba ny fahasambaran'ny ankizy. Ary raha hitan'ireo dokotera, ohatra, fa misy porofonà fampijaliana ara-batana rehefa manao fitsirihana ara-pahasalamana ry zareo any an-tsekoly, takiana amin'izy ireo ankehitriny ny hanaovany tatitra momba ny ahiahiny. Tany aloha, ny fandefasana ho aminà manampahaizana tahaka izany dia nilàna fankatoavana mialoha avy amin'ny ray aman-dreny, izay fifampiraharahàna adaladala ihany, satria tsy misy ray aman-dreny handeha hitoroka ny tenany any amin'ny manampahefana izany .
Nampidirin'ilay lalàna hatramin'ny fomba fiteny hoe “herisetra ara-toekarena,” izay ampiasàn'ilay mpanararaotra ny toerana tazoniny ao anaty fifanarahana ao an-tokantrano ao mba tsy hahafahan'ny vadiny mitady asa na manery azy ireny hijanona ao an-trano tsy araka ny nahim-pony.
Ireo ray aman-dreny manery ny zanany handeha hangataka na handao ny sekoly noho ny antony samihafa dia ho henjehan'ilay lalàna ihany koa. Lazain'ny fikarohana nataon'ny UNICEF, fa amin'ny ankizy 2.000 nanontaniana, manodidina ny 70 isanjato no nilaza fa niharan'ny fampijaliana na fomba fitondra tsizarizary ataon'ireo ray aman-drenin'izy ireo.
Lalimpàka ny olan'ny herisetra ao anivon'ny fianakaviana any Kyrgyzstan. Araka ireo tarehimarika ofisialy, iray amin'ny vehivavy efatra efa nanambady no efa niharan'ny fanararaotana feno herisetra. Tamin'ny 98 amin'ireo tranga nisy, dia ny vady ao an-tokantrano na ireo efa nisarahana no nanao ny herisetra.
Ela vao tonga ity fanavaozana ny lalàna ity. Efa tamin'ny 2009 ireo mpikatroka mpiaro zon'olombelona no nanosika ny hanaovana fanovàna, saingy tototr'ireo korontana politika izay niseho nandritra sy taorian'ny fanonganana fitondrana tamin'ny 2010 ilay hetsika.
Vao tamin'ny 2016 ny antenimiera no niverina indray nijery ilay raharaha sy nandany ilay lalàna nasiana fanitsiana.
Araka ny nanangonan'ny Human Rights Watch azy tamim-pikaliana fatratra, anefa, ny olana amin'ny lalàna sy ny tsy fahavitan'ny fampiharana azy ireny dia efa hatrizay no niharatsy noho ny tsy firaharahiana avy amin'ny fiarahamonina sy ny tsy fahampian'ny fitaovana azo ianteherana ho an'ireo niharan'ny fanararaotana ara-batana, ara-pilàna, na ara-pihetsehampo.
Tamin'ny 2003, taorian'ny fanentanana iray nafotaka ho fanangonana sonia, nankatoavin'i Kyrgyzstan ny lalàna iray manohitra ny herisetra ao anivon'ny ankohonana. Araka ny tombana iray avy amin'ny Firenena Mikambana, nanamarika fivoarana goavana amin'ny fiarovana ny zo sy ny fahalalahan'ny vehivavy ilay lalàna. Ahafahan'ireo niharan'ny herisetra mametraka fitoriana, mangataka fiarovana araka ny lalàna hatramin'ny 15 andro ary miantso fitsaran'ireo zokiolona eo an-toerana.
Saingy, raha ny marina, mbola misy ireo vato misakana ny làlana mankany amin'ny fametrahana fitoriana ka tsy ahafahan'ilay lalàna hahomby— izay antenain'ireo mpikatroka amin'izao fotoana izao ho efa nesorina ny ankabeazany.